PSJTV | आपतकालमा प्रयोग हुने अक्सिजन पनि नक्कली !
Sunday 24 March 2019 | आइतबार, १० चैत २०७५
आपतकालमा प्रयोग हुने अक्सिजन पनि नक्कली !
उच्च हिमाली क्षेत्रको आरोहण यसै पनि जोखिमपूर्ण हुन्छ । त्यसमाथि आरोहणमा जाँदा प्रयोग गरिने अक्सिजन गुणस्तरहीन भइदियो भने अवस्था कस्तो होला ? तर यहाँ भइरहेको छ यस्तै । हिमाल आरोहरणमा जाँदा प्रयोग गरिने अक्सिजन बिक्रीवितरणमा ठगी गर्ने गरेको पाइएको छ ।
उचाइमा लाग्ने ‘लिक्विड अक्सिजन’को सट्टा कम गुणस्तरका मेडिकल अक्सिजन प्रयोग गर्दै आरोहीसँग अधिक मूल्य लिइँदै आएको छ । मापदण्डबिना अक्सिजन कारोबार गर्ने कम्पनीसँग मिलेर ट्रेकिङ कम्पनीले आरोहीलाई लिक्विड अक्सिजनको सट्टा मेडिकल अक्सिजन सिलिन्डर प्रयोग गर्न लगाउने गरेको पाइएको छ ।
गुणस्तरहीन अक्सिजन प्रयोग गरी आरोहीसँग ट्रेकिङ कम्पनीहरूले चारदेखि पाँच सय डलरसम्म असुल गर्दै आएका छन् । मेडिकलमा पाइने सामान्य अक्सिजन हिमालमा प्रयोग गरिने लिक्विड अक्सिजनको बोतलमा भरेर ठगी गर्ने गरेको पाइएको हो । हिमालमा प्रयोग हुने लिक्विड अक्सिजनको ड्यू पोइन्ट मोइस्चर माइनस ६० डिग्री हुनुपर्छ । त्यो मेडिकल अक्सिजनमा नपाइने लिक्विड अक्सिजन व्यवसायी एवं एसडी ग्यासका प्रमुख डा. दिवश अमात्यले बताएका अन्नपूर्णमा खबर छ ।
‘हिमालको बाहिरी तापक्रम पनि चिसो हुँदा सिलिन्डरमा प्रेसर बढी भएर सीमित मात्रामा काम दिने भएका कारण आरोहीको जीवनमाथि नै एजेन्सीहरूले खेलवाड गर्दै आएका छन्’, एक आरोहीले नाम नबताउने सर्तमा भने । ६० प्रतिशतभन्दा बढी गुणस्तरहीन अक्सिजन प्रयोग गरेर ठगी हुने गरेको उनको दाबी छ । गुणस्तर नभएपछि अक्सिजनले ‘क्याम्प-२’ भन्दा माथि कामै नदिने गरेको उनको आरोप छ ।
समायाेजनले कर्मचारी अभाव
यौनकर्मी पुरुष खोज्न स्कुटर लिएर आउँछन् युवती !
विप्लवभित्र एक्लिँदै गए 'प्रकाण्ड'
ट्रम्प र किमबीच वार्ता असफल
यस कारण बन्द हुँदैछ 'गुगल प्लस'
काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा रहेको अवकाशसम्बन्धी ३० वर्षे सेवाअवधि हटाएर उमेरहद र पदावधिमात्रै कायम गर्न संघीय प्रहरी ऐन मस्यौदा बनाएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकै निर्देशनमा प्रहरी ...
काठमाडौं: भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी संहिता संशोधनका लागि अर्काे विधेयक ल्याइँदै छ । ‘नेपालको संविधान अनुकुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको’ उक्त विधेयक संसद् सचिवालयमा केही दिन ...